Abatshengisa Ukungethembeki Emidlalweni Lamazwe EAsia Bazethulelwa Izijeziso Ezitshiyeneyo-ZIFA
Mbimbitho 29, 2012
Abadlali belizweni abaphatheka kudaba lokungethembeki emidlalweni yenguqu lamazwe e Asia babikwa belakho ukwethulelwa izijeziso ezitshiyeneyo ezingaba yikukhuzwa kuphela kusiya ekuxotshweni kokuphela emdlalweni wenguqu.
Lokhu kuvezwe lamuhla ngumkhokheli wehlanganiso ebona ngemidlalo yenguqu elizweni eye ZIFA, uMnu. Dumiso Gumede, ekhuluma phambi kwekhomithi yedale lephalamende ebona ngezemidlalo.
UGumede utshele iStudio 7 ukuthi umlandu wokwethulwa kwezijeziso usesezandleni zowayengumahluli uJustice Ibrahim, njalo yena uGumede ubenika iziqondiso zesilinganiso sezijeziso njengoba wayekhokhela ikomithi eyayihlolisisa loludaba.
UGumede uqale ngokusifinqela akuphakulele idale lephalamende lamuhla, kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.